Ny serivisy Robotaxi mizaka tena voalohany any Eropa dia natomboka tany Netherlands
Home » Lahatsoratra farany farany » teknolojia » Ny serivisy Robotaxi mizaka tena voalohany any Eropa dia natomboka tany Netherlands
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Car Rental • Vaovao farany mikasika ny Netherlands • Vaovao • tompon'andraikitra • teknolojia • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Serivisy robotaxi mizaka tena voalohany eropeana natomboka tany Pays-Bas
Ny robotaxi dia ferry elektrika mizaka tena iray izay mandeha amin'ny herin'ny masoandro ary azo ekena miaraka amin'ny rindrambaiko ridesharing.
US Buffalo Automation dia nanangana tamim-pahanginana ny serivisy robotaxi ara-barotra voalohany tany Eropa.
Ny serivisy robotaxi no voalohany amin'ny karazany maro.
Ny fanombohana dia manokatra varavarana ho an'ireo tanàna manerana ny EU mba hampiasa io karazana fitaterana an-tany hafa io.
Buffalo mandeha ho azy, orinasa miafina amerikana miafina, ary Tambajotra fivezivezena amin'ny ho avy, mpandraharaha fitaterana an-tsokosoko eropeana, dia nanangana ny serivisy robotaxi voalohany mizaka tena eropeana. Ny fanombohana dia manokatra varavarana ho an'ireo tanàna manerana ny EU mba hampiasa io karazana fitaterana an-tany hafa io.
Ny serivisy robotaxi voalohany mizaka tena voalohany any Eropa natomboka tany Pays-Bas
Ny serivisy robotaxi no voalohany amin'ny karazany maro. Izy io dia ferry elektrika mahaleo tena iray izay mandeha amin'ny herin'ny masoandro ary azo ekena amin'ny alàlan'ny rindrambaiko fitsangatsanganana, saingy ny tena marihina, dia naparitaka ara-barotra izy io - mitondra mpandeha amin'ny fifamoivoizana eropeana ankehitriny. Ny fanombohana dia nahatonga ny fahafaha-manao safidy hafa amin'ny fampiasana fiara mifamezivezy mandeha irery ho toy ny fitaovam-pitaterana mora vidy sy sariaka.
Ny serivisy fitondra-by mitondra ny lohateny hoe "Vaar met Ferry" dia natolotry ny governemanta faritany holandey ary tsy andoavam-bola ho an'ny mponina hatramin'ny oktobra 2021. Warmond-Kagerzoom, Leiderdorp ary ny golf eo akaiky eo dia manana fifandraisana tsara kokoa, indrindra ho an'ireo mpitondra bisikileta sy mpandeha an-tongotra, mankany amin'ny faritra fialamboly Koudenhoorn.
"Hatramin'ny nanombohany, ny tanjon'ny Buffalo Automation dia ny hanatsara ny fiarovana sy hanaparitaka ny rano amin'ny alàlan'ny fampiasana ny haitao", hoy ny fanazavan'i Thiru Vikram, CEO. “Ity tetik'asa ity dia nanjary noho ny fiarahamonina eo an-toerana sy ny mpitarika ny orinasa izay vonona hitady maodely fitaterana hafa. Ity fanombohana manan-tantara ity dia hanamafy ny fahavononantsika hanomezana ny mponina any South Holland fitaovana fitaterana angovo madio sy madio izay miaro ireo blueways sy loharanon-karena voajanahary marobe. Ny fandefasana ity serivisy robotaxi elektrika ity, izay ampiasain'ny haitao Greycraft antsika, amin'ny ony eropeana dia asa iray nahafinaritra ho an'ireo ekipa mpiasanay. Faly izahay fa ny manampahefana holandey ary koa ny olona ao amin'ny FMN sy NGS dia mizara ny fahitanay ary manantena ny fandefasana drafitra bebe kokoa manerana ny dobo. ”
Ny Kaominin'i Teylingen, Alderman Heleen Hooij, Hollande Atsimo, tompon-daka amin'ny haitao maitso, dia mazoto amin'ny tombontsoa azo avy amin'ity sambo ity. “Miavaka ny fananan'ny Kaominin'i Teylingen scoop: ferry mandeha irery!” Hoy izy. “Mahafinaritra fa afaka mampiasa an'ity serivisy sambo manavao ity isika, nomanina sy ampiharin'iray amin'ny mponinay, amin'ity fahavaratra ity. Ary mahafinaritra fa ny mpianatra avy amin'ny Delft amin'ny de Groote Sloot dia mety hahita toerana ianarana ho an'ny tetikasan'izy ireo. Tena faly aho fa hamindra ny mpandeha an-tongotra sy ny bisikileta ity sambo ity ho tetikasa mpanamory fiaramanidina. Raha hita fa nahomby ny sambo, dia afaka mandray anjara amin'ny fidirana maharitra eo amin'ny faritra fialamboly ao Kagerzoom sy Koudenhoorn. ”
Ny fidirana ifampizarana amin'ny ferry elektrika mandeha irery dia fotokevitra lehibe indrindra ao amin'ny fanoloran-tenan'ny Buffalo Automation hiantoka fa tsy miompana amin'ny olom-banona avo lenta ny sambo - mitondra ny fomba fiaingam-piaramanidina ho an'ny be sy ny maro, ny demokrasia amin'ny fitaterana na inona na inona fari-piainan'ny olona. fahaizana na fahaizana ara-bola hananana fiara, eo am-piarovana ny tontolo iainana.
Anne Koning, Mpanatanteraka any amin'ny faritra atsimon'i Holland: "Noho ny fepetra hifehezana ny coronavirus, dia mivoaka bebe kokoa ao amin'ny firenentsika isika. Vokatr'izany dia nitombo be ny tsindry fialamboly any amin'ireo faritra maintsontsika. Miaraka amin'ny fanomezana ara-bola avy amin'ny faritanin'i Holland Atsimo, dia mahatsapa fifandraisana fanampiny amin'ny nosy Koudenhoorn izahay. Izany no antenainay mba hiparitahan'ny mpitsidika tsara kokoa, ary hiantoka izahay fa afaka milamina ihany koa ireo mpanala voly amin'ity fahavaratra ity, mankafy ity faritra mahafinaritra ity. ”